I-Cabaña Cerro Kraisser - I-Airbnb
I-Cabaña Cerro Kraisser
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe eyakhiwe ngobumba etholakala amamitha angu-900 eningizimu ye-Puerto Tranquilo, ogwini lomgwaqo oseningizimu. Ungafinyelela ezindongeni ngokuhamba (imizuzu engu-10 ukukhuphuka) noma ngemoto (imizuzu engu-2).
Inqaba isetshenziselwe ukuhlala kwabantu abangu-2, "indlu eyakhiwe ngamapulangwe" ngakho-ke asinikezi isidlo sasekuseni, nokho, ikhishi linakho okudingekayo, ukuze ukwazi ukulungiselela ukudla kwakho.
Ukusuka ku-dome unombono ohlaba umxhwele we-Lake General Carrera.
Amahlathi oMdabu azungeza ikhabethe ngalinye elisesimweni sedome, angakwazi ukuphumula, abuke imvelo futhi acabange ngechibi, futhi alalele ukucula kwezinyoni, umsindo wezihlahla futhi abuke ilanga ekuseni nenyanga ebusuku. .
Idome esitezi sokuqala linekhishi, igumbi lokugezela kanye negumbi lokudlela kanti esitezi sesibili kunombhede ophindwe kabili, onepheya elingu-1 lamathawula esivakashi ngasinye, kanye nensipho neshampoo.
Idome linesici sesistimu yokushisisa yeSifunda sase-Aysen (ukushiswa kwezinkuni kancane).
I-Dome ngayinye izimele, indawo edingekayo yokupaka izimoto, indawo ethule, ngaphandle komsindo ojwayelekile wendawo yasemadolobheni, kodwa ngesikhathi esifanayo ebangeni elilinganiselwe elibavumela ukuthi bafike ngemizuzu embalwa edolobheni ukuze bathenge, badle, bahambe phakathi abanye.
Asinikezi i-Wi-Fi ne-TV ngoba sifuna izivakashi zabelane, zixoxe futhi zijabulele zodwa, ngaphezu kwalokho, isignali ye-inthanethi yePuerto Río Tranquilo ingeyekhwalithi evamile.
4.89 · 135 okushiwo abanye
IPuerto Río Tranquilo iyidolobha elincane, kodwa inezindawo ezihlukene zokudla nokujabulela obhiya bezandla.
Kukhona futhi nokunikezwa kukaphethiloli wamahora angu-24 wezimoto, amabhizinisi noma izitolo ezinkulu ezihlinzeka ngemikhiqizo eyahlukene futhi zisebenza nenethiwekhi yokuthenga.
Ukufinyelela echibini kulula futhi kungamamitha ayi-100 nje ukusuka emgwaqeni ongasemanzini.
Kuyidolobha, elinabantu abanobungane kakhulu, indawo ephephile yokuhamba ubusuku nemini.
Isignali yocingo ehamba phambili i-Entel futhi ngenkathi yasehlobo i-inthanethi ngokuvamile ihamba kancane, ngenxa yokwanda kwabantu abaxhumeke kunethiwekhi.
Okunye konke kuphelele, idolobhana elincane, elihle, lasemaphandleni elisagcina umlingo waseningizimu.
Izivakashi zethu zingabuyekeza incwadi yezivakashi, equkethe incazelo yezindawo ezikhanga izivakashi ezinconyiwe.